Xildhibaan ka tirsan BF oo Somaliland u aqoonsatay inay tahay dal madax-banaan | Arrimaha Bulshada
Home English News News Xildhibaan ka tirsan BF oo Somaliland u aqoonsatay inay tahay dal madax-banaan
Xildhibaan ka tirsan BF oo Somaliland u aqoonsatay inay tahay dal madax-banaan
Bulsha:- Xildhibaan Gobsan Muxumad oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta xarunta Golaha ka sheegtay in Somaliland ay tahay dal madax-banaan, taasi oo ka hor-imaneysa midnimada Soomaaliya.
Xildhibaanada ayaa ku dooday in illaa inta natiijo la isla qaato laga gaarayo wada-hadalka Soomaaliya iyo Somaliland in lagu ixtiraamo Somaliland jiritaankeeda iyo madax-banaanideeda, sida ay hadalka u dhigtay.
“Somaliland waa dal madax-banaan oo gooni u istaagay illaa inta arrintooda iyo waxyaabaha ay tabanayaan miiska la keenayo in halkooda lagu hayo oo lagu ixtiraamo,” ayey tiri.
Sidoo kale waxay sheegtay in tallaabadii ay qaaday Kenya shalay ee aheyd in kulankii Uhuru Kenyatta kasoo wada muuqdan calanka Soomaaliya iyo Somaliland ay tahay mid la isaga hor keenayo labada dhinac.
“Kenya waxa leenahay ma mudna in dad walaalo ah cuqdad laga beero, kii yimid iyo kii cadhooday midna eedeyn uma jeedinayo, waxa eedeyn u jeedinaya dowladda Kenya. Arrimaha Soomaaliya ee xalka u baahan anaga ayaa halkan u joogna oo ku jaan-goynayna.”
Hadalka Xildhibaanada ayaa imanaya xili ay dowladda Kenya ay raali-gelin ka bixisay in calanka Somaliland shalay lagu arkay munaasabad uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku casuumay diblomaasiyiinta caalamiga ah ee ee ku sugan Nairobi.
Ayada oo Kenya cabashadaas ka jawaabeysa ayey Wasaaradda Arrimaha Dibeddda waxay xalay soo saartay qoraal ku socda safaaradda Soomaaliya, kuna bixineyso raali-gelin.